Cpanel ---> Login Attempt Failed! - MYSTERY ZILLION
Cpanel ---> Login Attempt Failed!
December 2011 edited December 2011 in Joomla
မနေ့ညနေထိကို Cpanel ကို login ဝင်ပြီး သုံးလို့ရနေသေးတယ်
ဒီနေ့မနက်ကျတော့ Joomla ကနေ ပုံတွေUpload လုပ်နေတုန်းရှိသေးတယ် ရုတ်တရက် JFTP::login: Unable to loginJFTP::write: Unable to use passive mode ဆိုပြီးပေါ်လာပြီး ပုံတွေတင်လို့မရတော့ဘူး ။ အဲဒါနဲ့ အဖြေရှာရင်း Global configuration မှာ Enable FTP ကို No လုပ်လိုက်တာ ပုံတင်လို့ရသွားတယ် ။ အဲဒီနောက် Enable FTP ကို Yes ပြန်လုပ်တာ လုပ်လို့မရတော့ဘဲ JFTP::login: Unable to loginJFTP::write: Unable to use passive mode ဆိုပြီး ထပ်ပေါ်လာတယ်။ အဲဒါနဲ့ Cpanel ကို Login ဝင်တာလဲ Login Attempt Failed! ဆိုပြီးပြနေတယ် ။ အဲဒါနဲ့ Filezilla ကနေတဆင့် configuration.php ထဲကိုဝင်ပြီး var $ftp_enable = '1'; <--- စစက0ဖြစ်နေတာကို 1 ဆိုပြီး ပြောင်းပြီး Save လိုက်တာ Joomla backend ထဲမှာလဲ Yes ဖြစ်သွားတယ် ။ ဒါပေမဲ့ Cpanel ကို login ဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် ။ Login Attempt Failed! ဆိုပြီးပဲပြနေတယ် ။ google မှာလဲရှာကြည့်တာ password ပြောင်းလိုက်ရင်ရတယ်ဆိုလို့ filezilla ကိုဝင်ပြီး .. password ပြောင်းပြီး login ဝင်လိုက်တာ Login Attempt Failed! ဆိုပြီးပဲ ပြနေတယ် ။ ဘာလို့အဲလိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူး ။ တကယ်လို့ လုံး၀မရတော့ရင် hosting provider ကိုဘဲသွားပြောရတော့မယ်ထင်တယ် ။ ကူညီကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
FTP က passive mode နဲ့ ဝင်လို့ မရတော့တာ ဖြစ်မယ်။
Cpanel Login attempt failed ပြဿနာက hosting နဲ့ ဆိုင်မယ်။
Cpanel ထဲဝင်ပြီး FTP account အသစ်ဆောက်ပြီးတော့ စမ်းကြည့်ပါ။
FTP account အသစ်ဆောက်ဖို့က Cpanel ကို ဝင်လို့မရဘူးဆိုတော့
တခြား FTP account အသစ်ဆောက်မဲ့နည်းများရှိသလား ?
Cpanel က တစ်ယောက်ယောက် password ပြောင်းလိုက်သလား confirm လုပ်ပါ။
မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ hosting ကို အကြောင်းကြားပါ။
FTP ဝင်မရတာက local machine မှာ fire wall က port 21 ကို ပိတ်ထားလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ firewall setting မှာ FTP အလုပ်လုပ်ခွင့် ပေးထားလား ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ ။ Cpanel password ကမပြောင်းပါဘူး။ စစ်ပြီးပါပြီ။ Filezilla ကနေဝင်ပြီး configuration.php ထဲမှာစစ်လိုက်တာပါ။
အခုတော့ internet hosting provider ကို အကြောင်းကြားလိုက်ပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်